You are at:Home»Blogs»Denhe Reruzivo»Zvinoshorwa munyaya
By Munyori weKwayedza on	 April 6, 2018 · Denhe Reruzivo
Tsanangura zvinhu zvaungati ndizvo zviri kushoropodzwa nemunyori maererano neupenyu hwemazuva ano muna Kereke Inofa. 
Munyori ari kushoropodza vanhu vari kuenda mhiri kwemakungwa kunotsvaga mari nenzira yechipfambi. Izvi tinozvinzwa naSarah paanenge akagara naMary naPastor Mwenje kumba kwavo kuUK mumupanda wekudyira ari mangwanani. Anoti akanzwa naMary kuti kune vanhurume nevanhukadzi vaibva kuZimbabwe vachiendako kunotsvaga mari kana raramo nenzira yechipfambi.
Munyori ari kushoropodza vanhu vasiri kugona kushandisa fesibhuku. Izvi zvinobuda kuna Charles anenge achitsiurwa nehanzvadzi dzake, Judith naBeauty kuti asanyanye kuita zvefesibhuku achishaya mukana wekuverenga mabhuku. Charles anenge ave kudofora muchikoro nekuti aishaiswa mukana wekuverenga nefesibhuku.
Munyori ari kushoropodza vanhu vanoshandisa indaneti zvisirizvo. Izvi tinozviona panonzi naBeauty indaneti yakanaka zvikuru nekuti ruzivo rwese rwakanyorwa rwunowanikwapo asi akaipa munhu anoishandisa. Anoti indaneti inoshatira kuti haitarise rudzi nezera remunhu inongoita zvayaudzwa kuti iburitse zvisinei nehunaku kana huipi hwazvo.
Chimwe chinoshoropodzwa nemunyori webhuku iri vanhu vasingagoni kushandisa watsiapu. Zvinobuda panonzi naBeauty watsiapu inodyira munhu nguva kupinda fesibhuku nezvimwe kana akatadza kuzvibata zvinoita kuti azokundikana kuita chinhu chinobatika muupenyu.
Munyori anoshoropodza huori huri kuitwa nevatungamiri vemachechi. Tinozviona kuna Pastor Mwenje vanoba mari gumi rezviuru zvemayusa ekereke aifanira kunobatsira varombo vachiapa Sarah nhengo yechechi yavaidanana nayo ndokuzogadzirisa marisiti ekunyepera kuti vasabatwe kuti vakanga vambobvisa chimwe chidimbu chemari iyi.
Chinonyanya kushorwa nemunyori kutadza kuzvibata kunoitwa nevakuru vemachechi.
Munyori anojekesa izvi naPastor Mwenje vaitungamira Revelations Church ndokutadza kuzvibata vachibva vatanga kudanana nenhengo yemukereke mavo, Sarah mudzimai waZebra. Kusazvibata kwaPastor Mwenje kunoita kuti vazoguma vapa Sarah mwana muchivande zvinoita kuti Zebra asazoda zvekunamata.